Spellings by Daw Tin Nwai Win - Myanmar Network
Spellings by Daw Tin Nwai Win
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on February 20, 2015 at 11:23 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Spellings စာလုံးပေါင်းများသည် အင်္ဂလိပ်စာ ရေးသားရာတွင် အလွန်အရေးကြီးသော ကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ စာလုံးပေါင်း အမှားများပါက writing ကောင်းတစ်ပုဒ် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် စာလုံးပေါင်းကို အထူးပြုလေ့လာသင့်ပါသည်။
Words often misspelt
စာရေးသားရာတွင် မကြာခဏစာလုံးပေါင်းမှား ပေါင်းမိကြသည်ကို ကြုံတတ်ရပါသည်။ အောက်ပါ multiple choice သင်ခန်းစာကို လေ့ကျင့်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မိမိ၏ စာလုံးပေါင်း စွမ်းရည်ကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Each of the sentences below has two possible spelling errors. Choose the sentence in which both words are spelt correctly.
a) We can’t decide whether to go to the Mediteranean or the Caribbean for our holidays.
b) We can’t decide whether to go to the Mediterranean or the Caribbean for our holidays.
c) We can’t decide whether to go to the Mediteranean or the Carribean for our holidays.
d) We can’t decide whether to go to the Mediteranean or the Caribean for our holidays.
a) We wouldn’t recommend accommodation at that hotel.
b) We wouldn’t recomend acomodation at that hotel.
c) We wouldn’t recommend acommodation at that hotel.
d) We wouldn’t recomend accommodation at that hotel.
a) I wish the Principle would practise what he preaches.
b) I wish the Principle would practice what he preaches.
c) I wish the Principal would practice what he preaches.
d) I wish the Principal would practise what he preaches.
a) Waiting was unecessary because of the good organisation.
b) Waiting was unnecesary because of the good organisation.
c) Waiting was unneccessary because of the good organisation.
d) Waiting was unnecessary because of the good organisation.
a) The weather was definately beginning to improve.
b) The weather was definitely begining to improve.
c) The weather was definitely beginning to improve.
d) The weather was definately begining to improve.
Answer Key ဖြင့် အဖြေကိုက်ကြည့်ကြရအောင်။
1. b, 2. a, 3. d, 4. d, 5. c
1. b) အဖြေမှန်ဖြစ်ရခြင်းမှာ ပင်လယ်များ ဖြစ်ကြသော "Mediterranean" နှင့် "Caribbean" တို့၏ စာလုံးပေါင်းကို စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ "Mediterranean" ၏ စာလုံးပေါင်းအမှန်မှာ "r" နှစ်လုံး ဖြင့် ပေါင်းရမည်ဖြစ်ပြီး "Caribbean" ကို "b" နှစ်လုံးဖြင့် ပေါင်းရမည်ဟု မှတ်သားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
2. a) တွင် "recommend" ကို "m" ၂လုံး ဖြင့် ပေါင်းပြီး "accommodation" ကို "c" ၂လုံး၊ "m" ၂လုံး ဖြင့် ပေါင်းသည်ဟု မှတ်သားပြီး စာလုံးပေါင်းကို အလွတ်ကျက်မှတ်သင့်ပါသည်။
3. d) Principal ကျောင်းအုပ်၏ စာလုံးပေါင်းအမှန်မှာ "pal" ဖြစ်ပြီး "practise" ကို "se" ဖြင့်ပေါင်းခြင်းသည် British English တွင် "verb form" ဖြစ်ပြီး "ce" ending သည် "noun form" ဖြစ်ပါသည်။
4. d) "unnecessary" ၏ စာလုံးပေါင်းအမှန်ကို စစ်ဆေးထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို စကားလုံး၏ base form/root word သည် "necessary" ဖြစ်ပါသည်။ "necessary" ကို စာလုံးပေါင်းရာတွင် "c" ၁လုံးတည်းဖြစ်ပြီး "s" ၂လုံးဖြစ်ပါသည်။
ထို base/rood word ကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြောင်းပါက prefix "un" ကို ရှေ့မှ တပ်ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် "unnecessary" တွင် "n" ၂လုံး ရှိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
5. c) "definitely" ကို စာလုံးပေါင်းရာတွင် base/root word "definite" ကို suffix "ly" ပေါင်းခြင်းဖြင့် "definitely" ဟူသည့် စာလုံးပေါင်း အမှန် ဖြစ်စေပါသည်။
"beginning" ကို ပေါင်းရာတွင် root/base word "begin" ၏ နောက်ဆုံး စာလုံး "n" ၏ အရှေ့တွင် vowel "i" ရှိသဖြင့် နောက်ဆုံးစာလုံးကို double ပြုလုပ်၍ "n" ၂လုံး ဖြင့် ပေါင်းရပါသည်။ ထို့ကြောင့် "beginning" ၏ စာလုံးပေါင်းအမှန်တွင် "n" ၂လုံး ပါပါသည်။
The formations of correct spellings ကို sentence level တွင်အသေးစိတ်လေ့လာပြီးနောက် paragraph ရှိ misspelt လုပ်ထားသည့် စာလုံးပေါင်းများကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။ စာပိုဒ်ကို လွယ်ကူစွာ အသေးစိတ်ရှာဖွေနိုင်ရန် စာကြောင်း တစ်ခုစီ ခွဲပေးထားပါသည်။ အောက်ပါ လေ့ကျင့်ခန်းကို ဖြေကြည့်ရအောင်။
The following piece of writing has ten spelling errors. Find them out.
I started working in advertising because I wantedajob that was glamorous.
I thought that I mite meet sum beutiful models and famous photographers.
The only model I have met so far isamodel of the Eiffel Tower that we used in an advertisment for some French dressing.
Its not bad work, writting advertising copy all day, but is definately not as exsiting as I thought it was going to be.
I sometimes get inpatient with my boss but nobodies perfect.
Error ၁၀ ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးပါက Answer Key နှင့် တိုက်ကြည့်ပါ။
Error: advertisment (4)
Correct spelling: advertisement
It’s / It is
Errors (1) and (2) သည် ဝါကျ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို အသေအချာမစဉ်းစားဘဲ အသံထွက်ကို လိုက်၍ စာလုံးပေါင်းခြင်းကြောင့် မှားယွင်းပါသည်။ errors (1) and (2) သည် စာလုံးပေါင်းမှားလျှင် အဓိပ္ပါယ်မှားတတ်ကြောင်း ပေါ်လွင်ပါသည်။
Error (3) beutiful မှာ careless mistake ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ Spell check ပြန်မပြုလုပ်မိ၍ သိလျက်နှင့် မှားတတ်သည့် အမှားမျိုးဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Error (4) advertisment ပေါင်းရာတွင် "e" ပြုတ်ကျကျန်နေခြင်းမှာ careless mistake သော်၎င်း၊ "advertise" မှာ last letter "e" ဖြစ်၍ last letter "e" ဖြုတ်ရမည် အထင်ဖြင့်၎င်း မှားရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Error (5) Its သည် ပိုင်ဆိုင်မှုကို ပြပြီး It's သည် It is ၏ အတိုကောက် contraction ဖြစ်ပါသည်။
Error (6) writting သည် single "t" ဖြင့်သာ ပေါင်းသဖြင့် စာလုံးပေါင်းအမှန်မှာ "writing" ဖြစ်ပါသည်။ "written" ရေးသားယျားတွင်သာ "tt" ဖြင့် ရေးသားပါသည်။ "written" နှင့် မှား၍ ရေးသားခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Error (7) definately ဟု အသံထွက် လွဲမှား၍ "i" ဖြင့် ပေါင်းရမည့်အစား "a" ဖြင့် လွဲမှား ပေါင်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Error (8) exsiting ဟု မှားရခြင်းမှာ "s" နှင့် "c" သည် "s" sound အသံထွက်ခြင်း တူသည့်အခါများရှိပါ၍ "c" နှင့် "s" လွဲမှားပေါင်းခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Error (9) inpatient သည် point of articulation ခေါ် အသံထွက်ရာတွင် ပါးစပ်ပိတ်မဆိုသဖြင့် "m" အစား ပါးစပ်ပွင့်သည့် "n" နှင့် sound production မှားသဖြင့် spelling ပါလိုက်မှားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Error (10) nobodies မှာ အသံထွက်အတိုင်း လိုက်ပေါင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ English language ၏ သဘောသဘာဝဖြစ်သော "nobody's" သည် "nobody is" ၏ contraction ဖြစ်ကြောင်းကို နားမလည်၍ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဤ Exercise A နှင့် B ရှိ စာလုံးပေါင်းမှားယွင်းရခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းများကို သဘောပေါက်နားလည်ထားပါက စာလုံးပေါင်းရာတွင် အမှားအယွင်း နည်းလာနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် စကားလုံး တစ်ခု၏ စာလုံးပေါင်း မသေချာပါက dictionary entry ဖြင့်၎င်း၊ ကွန်ပျူတာရှိ spell check ဖြင့်၎င်း check လုပ်သင့်ပါသည်။ check လုပ်ထားသော correct spelling ကို ကျက်မှတ်ထားခြင်းဖြင့်လည်း စာလုံးပေါင်း အမှားအယွင်းနည်းလာနိုင်ပါသည်။
စာလုံးပေါင်း အမှားအယွင်းနည်း၍ စာအရေးအသား တိုးတက်ကြပါစေ။
Reference: GCSE Success (WorkBook), English and English Literature (Letts and Longsdale) (page 20)
'Twerking' and 'selfie' added to Oxford dictionary
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ပြောဆိုရေးသားရာတွင် သွက်လက်ချောမွေ့မှုရှိခြင်း (Beco...
Permalink Reply by Aung Soe Oo on February 20, 2015 at 16:38
Permalink Reply by Moe Satt Pwint on February 20, 2015 at 20:21
Permalink Reply by mayri on February 21, 2015 at 10:36